मोडलिङमा स्थापित हुँदै सपना | Rato Kalam
मोडलिङमा स्थापित हुँदै सपना
काठमाडौं कपनकी २५ वर्षीया सपना खड्का आधा दशकदेखी मोडलिङमा सक्रिय छिन् । काठमाडौंमा कलेज पढ्दा–पढ्दै मोडलिङमा सक्रिय सपनाले पहिलो पटक नरेन्द्र प्यासीको गीतमा मोडलिङ गरिन् । नृत्यमा पारङ्गत उनले अहिलेसम्म २० वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरी सकेकी छिन् । सपना मोडलिङमै आफ्नो भविष्य बनाउन चाहन्छिन् । पहिले सित्तैमा पनि म्युजिक भिडियोमा काम गरे, सपनाले भनिन्, अहिले पारिश्रमिक लिएर मात्र अभिनय गर्छु । मोडलिङबाट अहिलेसम्म राम्रै कमाई भएको उनी बताउँछिन् ।
सपना मिलनसार छिन् । उनको मुस्कानले सबैलाई मोहित तुल्याउँछ । कलकारिता आफ्नो रुचिको पेसा भएको कारण यसैलाई अघि बढाउन उनी निक्कै मेहेनत गर्छिन् ।
परिवारको पनि सहयोग भएकाले यही क्षेत्रमा भविष्य बनाउँछु भन्ने उनलाई लागेको छ । भन्छिन्, ‘सानैदेखीको इच्छा यहि क्षेत्रमा भएकोले मोडलिङमा भविष्य राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ । यसैमा भविष्य बनाउने विचारमा छु ।’
बिभिन्न म्यूजिक भिडियो,मुभीमा व्यस्त सपनाको एकपछि अर्को म्यूजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भईरहेका छन् । हालैमात्र उनी अभिनित गायक कुमार पौड्यालको आधुनिक गीत ‘यो दुनिँया’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
रहर र करियर कलाकारिता भएको कारण उनलाई अन्त खासै रुचि छैन रे । किनकी उनको कलाकारिता सानैदेखीको सोख हो ।
रिसानी भए माफ, हुन्छ बहादुर,हाकाहाकीमा समेत अभिनय गरेकी सपना कलाकारितामा स्थापित हुने क्रममा छिन् । म्यूजिक भिडियोहरुमा अफर आईरहेको बताउने सपनालाई धेरैले रेखा थापा जस्तै छौ भनेर जिस्काउने पनि गर्छन् । उनको सपना छ, ठुलो पर्दाबाट दर्शकको मन मुटुमा बस्ने ।
सपना भन्छिन्, संघर्ष जारी छ, एकदिन कसो शिखर नचुमिएला ।
दशैको लागि ५ गतेबाट अग्रिम टिकट खुलाइँदै
हेर्नुहोस तपाइको राशिफल: वि.सं. २०७६ भदौ २७, शुक्रबार, इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर १३